SIDA LOO SAMEEYO KHAANAD LOOGU TALAGALAY GEEDO LEH GACMAHOODA - SEEDLING
Rage ah for geedo ma aha xajin, laakiin halkii ay lagama maarmaanka ah ee bannaanka u kuwaas oo loo isticmaalo in ay la macaamilaan wax ka badan hal sanduuq oo geedo. Xitaa marxaladaha hore ee horumarkooda, qajaarka, yaanyada, eggplants iyo dhirta kale ee beeraha ma haystaan ​​meel ku filan xayndaabka daaqada joogtada ah, taas oo micnaheedu yahay inay u baahan yihiin inay dhisaan dhowr rafaat oo labadooduba isku mid yihiin oo u shaqeynaya. Waxaanu soo bandhignaa si aan u baranno nooca nashqad ee la midka ah.
Haddii ay u muuqato in aysan jirin wax dhib ah oo ku jira dhismaha rafcaan, markaa taasi ma aha arrin sidaas ah. Waxay lahaan doontaa meel gaar ah ee guriga, sidaas darteed waa in ay si buuxda ugu habboon gudaha gudaha oo aan faragelin dhaqdhaqaaq xor ah.
Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in si dhakhso ah loo tixgeliyo baaxadda sanduuqyada mustaqbalka ee geedo, maxaa yeelay xajmiga ugu sarreeya ee rahamka si toos ah waxay ku xiran tahay xaddidan. Si naqshad dhamaystiran u buuxiso dhamaan shuruudaha la sheegay, waxaa muhiim ah in si sax ah loo xisaabiyo qiyaasta qayb kasta oo shakhsi ah isla markaana si sax ah u ogaato sida loola xidhiidho kuwa kale.
Sawirada iyo qiyaasaha
Waxaad ka abuuri kartaa dabaqyo kala duwan, laakiin mid ka mid ah doorashooyinka ugu fiican (fikradayada) waa dhafo leh dhererka hal mitir iyo badh iyo dhererka 180 cm, waxay si fiican u habboon tahay geedo badan oo kala duwan, waxaana jiri doona meelo kala duwan oo lagu daryeelayo. Waxaa jira 4 raxan oo wadar ah, laakiin si aan mar walba loo leexin, sanduuqyada waxaa lagu dhajin karaa oo kaliya laba dhexdhexaad ah, iyo kan hoose ayaa looga tagi karaa baahida qoyska. Masaafada u dhexeysa dhammaan rahamka ee kiiskayagu wuxuu u dhigmaa 50 cm (oo qoto dheer oo ah 60 cm), waana ka fiicnaan 10 cm oo u dhexeysa dabaqa iyo kan ugu horeeya si ay lugaha yar u helaan.
Waa muhiim! Bedelkii shelf sarre ah, haddii aadan rabin inaad sanduuqyada ku dul dhigto, waxaad samayn kartaa dhowr taageero oo kala duwan, taas oo markaa noqda meel aad u fiican oo lagu hagaajinayo waxyaabaha la yiraahdo nalalka iyo, isla markaa, waxay qaban doonaan qaabka oo dhan.
Waxa suurtagal ah in la sameeyo shinbiraha geedo laga soo bilaabo wax kasta oo la heli karo, waxay noqon kartaa noocyada biraha, qaybaha caagga ah ama baararka qoryaha. Mid kasta oo ka mid ah ayaa leh faa'iido iyo faa'iido darro, laakiin alaabada alwaaxa ayaa weli ah kuwo loo yaqaan xal ugu cillada badan dhibaatada: waxay yihiin kuwo la awoodi karo, si sahlan loo socodsiiyo, iyo marka lagu daboolo caag gaar ah, waxaa loo isticmaali karaa muddo tobanaan sano ah.
Intaa waxaa dheer, xoogga ka mid ah cagaha noocan oo kale ah ma aha mid ka xun ee noocyo biraha, laakiin inta badan waxay miisaan yar yihiin. Sida nooca qoryaha ah, waxay noqon kartaa mid adag (tusaale ahaan, laga bilaabo geedkii, ash ama bjørk), ama jilicsan (geed, dhoobo, qoryo). Shaqadayada, waxaan dooranay geed, sababtoo ah waa mid la heli karo oo ka sahlan dadka kale in la shaqeeyo.
Kaaliyeyaasha ugu muhiimsan ee dhismaha rafaadka hoos yimaada geedo ayaa la arki doonaa (si fiican ujirta dhamaadka, laakiin waxaad isticmaali kartaa sida caadiga ah), mastaradda, tikidhada ama shucaaca caadiga ah. Dabcan, haddii ay suurtagal tahay, waa wax macquul ah in lagu helo qalab koronto, maxaa yeelay ma fududa inaad fududayso, laakiin sidoo kale xawaaraha shaqada.
Waxaan kugula talineynaa inaad aqriso sida loo doorto sawir, dhejis, jiir iyo jigsaw.
Ma taqaanaa? Duufiyeyaashu waxay u adeegayeen nin tan iyo billowgii qarnigii labaatanaad, laakiin qaababka korantada ee maanta loo iibiyay oo kaliya iibintii oo keliya 50-kii hore ee qarnigii la soo dhaafay, tan iyo markaasna looma lumin waxtarkooda.
Sameynta suxufi geedo
Marka qalabka iyo alaabooyinka oo dhan ay diyaar yihiin, waa wakhti aad ugu guurto si toos ah dhismaha rafaadka. Xaqiiqdii, geeddi-socodkani wuxuu ka kooban yahay laba talaabo oo aasaasi ah: qaybo jarida iyo isu-ururinta.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhridid ​​sida loo koro geedo iyadoo la isticmaalayo waraaqaha musqusha, xafaayadaha, iyo in ay iibsadaan kiniisado iyo digirta digir ah geedo.
Makhaayadda qalabka guryaha, waxaad iibsan kartaa boonooyin badan oo ah dhumucdiis iyo ballac, laakiin waa inaad weli gooyaa. Sidaa darteed, kiiskeena, ballaadhka kuraasta hoosteeda waa 10.5 cm, qaybaha taageerada ee kaabayaasha waxaa laga sameeyaa 2x3 cm baararka. Markaad cabbirto dhererka loo baahan yahay ee xubin kasta, jeexitaanka waxaa lagu sameeyaa waji ama sawir caadi ah. Qoryaha daaqadaha iyo kuraasta ayaa loo duubi karaa labo-labo, kuwaas oo badbaadin doona wadarta wadarta shaqada. Natiijo ahaan, waxaan leenahay 4 lugood oo dheer, hal gaaban (si loo hagaajiyo qaabka dambe) iyo 8 gaaban oo gaaban.
Saddex roog ayaa ka kooban 15 xabbo dhererkiisu yahay 1.5 m. Haddii aad rabto in aad xoojiso xayawaanka, waxaad yareyn kartaa baararka gaaban si aad ugu dhejiso inta u dhaxaysa jibbaarada geesaha ilaa taageerada dhinaca (diagonal).
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah noocyada qaaliga ah ee qoryaha waa alwaax ebony ah, taas oo inta badan loo isticmaalo ujeedo madaxeed. Wixii ah 1 cu. Mulkiilayaasha m ayaa bixin kara 30 000 doolar.
Dhammaan qaybaha alwaaxda ah ee la gooyey waxaa la barbar dhigi karaa naqshadeeye, yaa loo baahan yahay in la duubo si loo helo badeecadda dhamaysay.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u akhrido sida loo doorto laydhka geedo iftiin ah, iyo sidoo kale sida loo dhigo iftiinka geedo guriga.
Si aad ula qabsato hawlahan waa mid sahlan, waxa ugu muhiimsan: in la raaco taxanaha tallaabooyinka:
Waxaan qaadanaa labada koowaad ee taakulada taageerada (dherer 1.8 m) oo, dib u soo kabashada geeska 10 cm, xaji karanka ugu horeeya ee u dhaxeeya.
Ka dib 50 cm ka dib, waxaan sixi karnaa mid kale, oo ka danbeeya laba kale, sidaa darteed natiijada waa nooca jaranjarada.
Sidoo kale, waxaan ku xiraynaa qaybaha taageerada ee dhinaca labaad ee khaanadaha mustaqbalka.
Hadda waxay ku xiran tahay inaan ku xirno "jaranjaradeena" ee leh jaranjaro ka kooban shan shandadood: waxaan ku dhejineynaa midka ugu horreeya ee xudduudaha hoose ee jaranjarrooyinka hoose, ka dibna ku dheji kuwa soo socda 1.5 cm oo dhan qoto dheer oo shelf mustaqbalka ah. Sidaa darteed, waxaad lahaan doontaa koowaad, kan ugu hooseeya, kaas oo kiiskeena loo adeegsan doono qalabka adeegga.
Sidoo kale, waxaannu abuuraynaa labada xabbadood ee sare, si fudud oo loo hubiyo dhammaan kuraasta taageerada dhinaca.
Halka ugu sarreeya, halkii shelf, waxaan isticmaalnaa kaliya halbeeg dheer oo qoryo dheer ah oo isku xiraya geesaha roogga (sida boorsooyinka, waxaa lagu dhejiyaa qalab isku-dhafan). Mustaqbalka, waxaad ku xiran kartaa nalalka.
Dhamaadka geeddi-socodka, qaybta dambe ee rafcaanka waxaan ku dhajin karnaa xagasha dheer ee dheer, kaas oo siin doona dhismaha ciriiri iyo xasilooni.
Waa muhiim! Halkii laga xiri lahaa tuubooyin waxaad isticmaali kartaa shkanty, laakiin kiiskan, ururinta rafcaanka ayaa qaadan doona waqti dheer. Xalku wuxuu ku habboon yahay dadka raba in ay naqshadeynta ka dhigaan kuwo soo jiidasho leh oo ay diyaar u yihiin in ay xoogaa xoogaa ka badan.
Halka ay ku habboon tahay in la dhiso qaabdhismeedka dhammeystiran
Goobta daboolka waa in la xushay iyadoo la tixgelinayo shuruudaha geedo mustaqbalka ah. Haddii aadan qorsheynin inaad isticmaasho ilaha iftiinka macmalka, ka dibna waxaa lagugula talinayaa inaad ku rakibto dhismaha u dhow daaqadaha ama balakoonka kuleylka, halkaas oo heerkulka hawada uusan hoos u dhicin +15 ° C
Baro nuucyada koritaanka iyo daryeesha geedo yaanyo, eggplant, basasha, kaabajka digoy, qajaarka, xididdo, strawberries beerta iyo ubaxyada.
Run, horumarinta wanaagsan ee dalagyada beerta intooda badan, qiimaha ugu fiicnaantu waxay noqon doontaa tilmaamayaasha heerkulka + 20 ... +25 ° C. Ha iloobin dhinaca ficil ahaan ee arimaha: raf-ka waa inaysan faragelinin dhaqdhaqaaqa dadka ama daryeelka geedo. Iyada oo dhismaha iyo habeynta dhismaha habboon, waxay si fiican ugu habboon gudaha gudaha waxayna caawin doontaa koraan dhirta quruxda badan iyo xoogga leh, oo maahan inaad lacag badan iyo dadaal badan ku qaadato rakibidda. Waan ku raacsanahay, tani waa runtii waa hab qiimo leh oo loogu talagalay sanduuqyo leh geedo.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Seedling 2019